Maxaa la sameeyaa? - www.yomelijah.com
Jumladaha buluugga ah (inta u dhexeysa laba baaragaraaf), waxay ku siin doonaan sharraxaad kitaabiga ah dhammaystir ah, kaliya dhagsii. Maqaallada Baybalka waxaa badanaa lagu qoraa afar af: Ingiriis, Isbaanish, Boortaqiis iyo Faransiis. Hadday ahaan lahayd in lagu qoro af soomaali, waxaa lagu ku xusan
"Ninkii miyir lahu sharkuu arkaa, wuuna dhuuntaa, Laakiinse garaadlaawayaashu way iska sii maraan, oo waana la taqsiiraa"
Markay dhib weyn soo dhowaatay, "masiibada",
maxaan sameyn karnaa si aan isu diyaarinno?
Diyaarinta ruuxiga ah kahor "dhib weyn"
"Oo waxay noqon doontaa in ku alla kii magaca Yehowah ku barya uu samatabbixi doono"
(Yoo'eel 2: 32)
Isu diyaarintaan kahor waxaa lagu soo koobi karaa hal jumlad: Raadi Yehowah:
"Kahor intaan qaynuunku wax dhalan, intaan maalintu u bixin sidii cammuudda oo kale, kahor intaan cadhadii kululi ee Yehowah kugu soo degin, intaan maalinta cadhadaadu kugu soo degin." Rabbiyow, dhammaantiin Yehowah doondoona, dhammaantiin kuwiinna camalka qabow ee dhulkow, oo xukunkiisa yeelayow, xaqnimo doondoona, oo is-hoosaysiiya, oo xaqiiqada ah cadhadiisa ayaad ku qarsoon tahay maalinta cadhada Yehowah" (Sefaniah 2:2,3). In la doondoonaa Yehowah waa in la barto jeclaanta isaga iyo in isaga la garto.
In la jeclaado Ilaah waa in la garto in uu leeyahay Magiciisu: Yehowah (YHWH) (Matayos 6:9 "magacaagu quduus ha ahaado").
Yehowah wuxuu rabaa in magiciisa laga wada ogaado dhulka oo dhan
Sidii Ciise Masiix tilmaamay, qaynuunka ugu muhiimsan waa jacayl Ilaah: "Kolkaasuu ku yidhi isaga, Waa inaad Rabbiga Ilaahaaga ah ka jeclaataa qalbigaaga oo dhan iyo naftaada oo dhan iyo caqligaaga oo dhan. Kanu waa qaynuunka ugu weyn oo ugu horreeya" (Matayos 22:37,38).
Waxaan ubaahanahay inaan ogaano casharada aasaasiga ah ee Kitaabka Quduuska ah si aan u baranno Ilaah una jeclaano isaga (oo ku qoran af-soomaali)
Jacaylka Ilaah tan ayaa loo maraa tukashada. Ciise Masiix wuxuu siiyay talo la taaban karo salaadda Matayos 6: "Oo goortaad tukanaysaan, ha ahaanina sida labawejiilayaasha, waayo, waxay jecel yihiin inay tukadaan iyagoo taagan sunagogyada iyo meesha jidadku isku gooyaan si ay dadka ugu muuqdaan. Runtii waxaan idinku leeyahay, Abaalgudkoodii way heleen. Laakiin adigu goortaad tukanaysid, qolkaaga qarsoon gal, oo goortaad albaabkaaga xidhid, Aabbahaaga meesha qarsoon ku jira bari, oo Aabbahaaga waxa qarsoon arka ayaa kuu abaalgudi doona. Goortaad tukanaysaan hadalka ha ku celcelinina sida dadka aan Ilaah aaminin yeelaan, waayo, waxay u malaynayaan in loo maqlayo hadalkooda badan aawadiis. Sidaa darteed ha ahaanina sidooda oo kale, waayo, Aabbihiin waa og yahay waxaad u baahan tihiin intaanad weyddiin.
Haddaba sidatan u tukada, Aabbahayaga jannada ku jirow, magacaagu quduus ha ahaado. Boqortooyadaadu ha timaado, doonistaada dhulka ha lagu yeelo sida jannada loogu yeelo. Kibis maalin nagu filan, maanta na sii. Oo naga cafi qaamahayaga sidaannu u cafinnay kuwa noo qaamaysan. Oo jirrabaadda ha noo kaxayn, laakiin sharka naga du. Waayo, boqortooyada iyo xoogga iyo ammaanta adigaa leh weligaa. Aamiin. Waayo, haddaad dadka u cafidaan xumaantooda, Aabbihiinna jannada ku jira ayaa idin cafiyi doona. Laakiin haddaanad dadka cafiyin, Aabbihiinnu xumaantiinna idiin cafiyi maayo" (Matayos 6:5-15).
Yehowah wuxuu weydiisanayaa in xiriirkeenna isaga ka dhexeeya uu ahaado mid gaar ah: "Laakiin waxyaalaha ay dadka aan Yuhuudda ahayn sadqeeyaan, waxay u sadqeeyaan jinniyo, ee Ilaah uma sadqeeyaan. Dooni maayo inaad jinniyada wax la wadaagtaan. Iskuma wada cabbi kartaan koobka Yehowah iyo koobka jinniyada. Kama wada qayb geli kartaan miiska Yehowah iyo miiska jinniyada. Miyaynu Yehowah ka hinaasinnaa? Miyaynu isaga ka xoog badan nahay?" (1 Korintos 10:20-22).
Waxaan u baahanahay oo kaliya inaan barinno Yehowah Ilaahay
In la jeclaado Ilaah waa in la aqoonsado in uu leeyahay Wiil, Ciise Masiix. Waa inaan jeclaano isaga oo aan aaminno allabarigiisa oo oggolaanaya cafiska dembiyadeenna. Ciise Masiix waa wadada kaliya ee nolosha weligeed ah ilaaheyna uu inaga doonayo in aan garowno: "Markaasaa Ciise wuxuu, Anigu waxaan ahay jidka iyo runta iyo nolosha. Ninna Aabbaha uma yimaado, xaggayguu ku yimaado maahee"; "Tanu waa nolosha weligeed ah inay ku gartaan, adoo ah Ilaaha runta ah oo keliya, iyo inay gartaan Ciise Masiix, kii aad soo dirtay" (Yooxanaa 14:6; 17:3).
Ciise Masiix waa jidka keliya ee nolosha weligeed ah
Amarka labaad ee muhiimka ah, sida uu sheegayo Ciise Masiix, waa inaan deriskeenna jeclaano: "Ku labaad oo u ekina waa kan. Waa inaad deriskaaga u jeclaataa sida naftaada. Sharcigii oo dhan iyo nebiyadiiba waxay sudhan yihiin labadan qaynuun" (Matayos 22:39,40); "Sidaasay dadka oo dhammi idinku garan doonaan inaad xertaydii tihiin, haddaad jacayl isu qabtaan" (Yooxanaa 13:35). Haddii aan Ilaah jeclaano, waa inaan sidoo kale jeclaadaa deriskeenna: "Oo ka aan jeclaynina Ilaah ma yaqaan; waayo, Ilaah waa jacayl" (1 Yooxanaa 4:8).
Ciise Masiix wuu reebay nacayb, dil sababihii waddaninimo ama waddaninimo diineed (Matayos 26:52; 1 Yooxanaa 3:15)
Haddii aan Ilaah jeclaanno, waxaan raadin doonnaa inaan ka farxinno anagoo leh dabeecad wanaagsan: “Nin yahow, Rabbigu wuxuu ku tusay waxa wanaagsan. Oo bal maxaa Yehowah kaa doonayaa, inaad caddaaladda samaysid, oo aad naxariista jeclaatid, oo aad si hoosaysa Ilaahaaga ula socotid mooyaane?" (Miikaah 6:8)
Haddii aan Ilaah jeclaanno, waxaan ka fogaan doonnaa "hab ficil" wuu neceb yahay: "Ama miyeydnaan ogayn in kuwa xaqa darani ayan dhaxlayn boqortooyadii Ilaah? Yaan laydin khiyaanayn. Ama dhillayaasha, ama kuwa sanamka caabuda, ama kuwa sinaysta, ama khaanisiinta, ama tuugagga, ama kuwa wax badan damca, ama kuwa sakhraama, ama kuwa wax caaya, ama kuwa wax dulma, ma dhaxli doonaan boqortooyadii Ilaah" (1 Korintos 6:9,10).
Baybalku wuxuu cambaareeyay dabeecadaha qaarkood (qaybta labaad) (oo ku qoran af-soomaali)
In la jeclaado Ilaah waa in la garto in Eebbe (tooska) nagu hago eraygiisa Kitaabka Quduuska ah. Waa inaan u aqrinaa maalin kasta si aan u ogaano Ilaah iyo wiilkiisa Ciise Masiix. Baybalku waa tilmaameheena: "Ereygaagu wuxuu cagahayga u yahay laambad, Waddooyinkaygana iftiin" (Sabuurradii 119:105). Kitaabka Quduuska ah ayaa laga heli karaa goobta iyo qaar ka mid ah aayadaha Kitaabka: (Matayos cutubyada 5-7: Wacdinta buurta, buugga Sabuurrada, Maahmaahyadii, afarta Injiillada ee Matayos, Markos, Luukos iyo Yooxanaa iyo aayado kale oo badan oo Baybalka ah (2 Timoteyos 3: 16,17)).
Waa inaan akhrinaa Kitaabka Quduuska ah maalin kasta
Waa inaan gaarno qaan garowga ruuxiga ah
Waxa la sameeyo inta lagu gudajiro "dhib weyn"
Sida ku xusan Kitaabka Quduuska ah waxaa jira shan shuruudood oo muhiim ah oo noo oggolaan doona inaan helno naxariista Eebbe inta lagu guda jiro dhibaatada weyn:
1 - In lagu baryo magaca Yehowah salaadda: "Oo waxay noqon doontaa in ku alla kii magaca Yehowah ku barya uu samatabbixi doono" (Yoo'eel 2:32).
2 - Inaad iimaan ka hesho allabariga Masiixa si aad u hesho dembidhaafka: "Oo bal eeg, waxyaalahaas ka dib waxaan arkay dad faro badan, oo aan ninna tirin karin, oo lagala soo baxay quruun kasta, iyo qabiil kasta, iyo dad kasta, iyo af kasta, oo taagan carshiga hortiisa iyo Wanka hortiisa, iyagoo qaba khamiisyo cadcad, gacmahana ku haysta caleemo timireed. (....) Oo waxaan ku idhi, Sayidkaygiiyow, waad taqaan. Markaasuu wuxuu igu yidhi, Kuwanu waa kuwii ka soo baxay dhibaatadii weynayd, oo waxay khamiisyadoodii ku maydheen oo ku caddeeyeen dhiiggii Wanka" (Muujintii 7:9-17). Dadkii badnaa ee ka badbaaday dhibaatadii weynayd waxay rumeyn doonaan qiimaha kafaaraggudka ee dhiigga Masiixa dembidhaafka.
Waa inaan xusnaa geerida Ciise Masiix sanad walba (oo ku qoran af-soomaali)
Dhibaatada weyn waxay u noqon doontaa daqiiqad naxdin leh aadamiga: Yehowah wuxuu weydiisan doonaa "wakhti barooran".
Dhibaatada weyn waa waqtiga Yehowah baabi'in doono nidaamyada aadanaha hadda jira
3 - Baroorashadii qiimaha ay ahayd in Yehowah bixiyo si uu noogu sii noolaado: Nolosha dembiga ee Masiixa ee aan waxba galabsan: “Oo reer Daa'uud iyo dadka Yeruusaalem degganba waxaan ku shubi doonaa ruuxa raxmadda iyo baryootanka, oo waxay arki doonaan aniga oo ah kii ay wareemeen, oo iyana isagay ugu barooran doonaan sida mid ugu baroorto wiilkiisa madiga ah, oo aad bay ugu murugoon doonaan isaga, sida mid ugu murugoodo curadkiisa. Wakhtigaas Yeruusaalem waxaa jiri doonta baroorasho weyn oo ah sidii baroorashadii Hadad-Rimmoon taasoo ku dhex tiil dooxada Megiddoo" (Sekaryaah 12:10,11).
Yehowah Ilaahay ayaa u naxariisan doona bini’aadanka neceb nidaamkan xaqdaran, sida ku xusan Yexesqeel 9: “Markaasaa Yehowah isagii ku yidhi, Magaalada Yeruusaalem dhexdeeda mar, oo waxaad calaamad ku dhigtaa jaaha dadka u taahaya oo u qaylinaya waxyaalaha karaahiyada ah oo dhexdeeda lagu sameeyo oo dhan"(Yexesqeel 9: 4; isbarbar dhig talooyinka Masiixa "Xusuusnow afadii Luud" (Lukos 17:32)).
Waxaa jiri doona dad fara badan oo idlaan dhibaatadii weynaa oo matali doonta saddex-meelood meel meel bini-aadamka waqtigan xaadirka ah sida ku xusan waxsii sheegyada Sekaryaah 13: 8 iyo Muujintii 7: 9-17
4 - Soonka: "Siyoon buun ka dhex afuufa, oo soon naadiya, oo shir ku dhawaaqa. Dadka soo ururiya, oo ururka quduus ka dhiga, oo odayaasha soo shiriya, oo carruurta soo ururiya, iyo xataa kuwa naasaha nuugaya" ( Yoo'eel 2:15,16, macnaha guud ee qoraalkani waa "dhib weyn" (Joel 2:1,2)).
5 - Ka fogaanta galmada: "Aroosku qolkiisa ha ka soo baxo, oo aroosadduna ilxidhkeeda ha ka soo baxdo" (Yooxanaa 2: 15,16). "Aroosku qolkiisa ha ka soo baxo" waa sawir sifeyn ah oo ka fogaanaya galmada ragga iyo dumarka. Talo soo jeedintan ayaa lagu si la mid nebiyada Sekaryaah cutubka 12aad kaasoo daba socda "qooysaska hadhay oo dhan, qolo walba gooni ahaantiis, naagahooduna gooni ahaantood" (Sekaryaah 12:12-14). Odhaahda "naagahooduna gooni ahaantood" waa muuqaal tusaale ah oo ah in laga fogaado galmada.
Waxa la qabanayo "dhib weyn" kadib
Waxaa jira laba talo bixin oo rabaani ah:
1 - In lagu ammaano Xukunka Yehowah iyo xorriyadda binu-aadmiga: "Oo waxay noqon doontaa in mid kasta oo ka hadhay quruumihii Yeruusaalem ku soo kacay oo dhan uu u kici doono inuu soo caabudo Boqorka ah Yehowah ciidammada, iyo inuu soo dhawro Iiddii Waababka" (Sekaryaah 14:16).
2 - Nadiifinta dhulka mudo 7 bilood ah, dhibaatadii weyneyd kadib, ilaa 10-ka bisha "nisan" (Bisha Juuda) (Yexesqeel 40:1,2): "Oo intii toddoba bilood ah ayaa reer binu Israa'iil iyaga aasi doonaan, si ay dalka u nadiifiyaan aawadeed" (Yexesqeel 39:12).
Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, ama aad jeclaan lahayd macluumaad dheeri ah, ha ka waaban inaad la xiriirto barta ama akoonka Twitter-ka ee bogga. Ilaahay ha ku barakeeyo qalbiyada saafiga by Wiilkiisa Ciise Masiix. Aamiin (Yooxanaa 13:10).